दोषी ठहर भए कति वर्षका लागी जेल जान्छन् रवि ? – Janacharcha.com
» समाज अंक: 550
दोषी ठहर भए कति वर्षका लागी जेल जान्छन् रवि ?
Janacharcha.com सोमबार, भाद्र ०२, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, भाद्र २
संचारकर्मी लामेछानेको प्रसंशक थुप्रै छन् त्यतिकै आलोचक पनि । एकातर्फ प्रसंशकहरु लामेछाने निर्दोष भएको भन्दै तत्काल उनको ससम्मान रिहाईको माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचकहरु लामेछाने नै दोषी भएको भन्दै कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिरहेका छन् । सर्मथक भन्छन् बाईज्जत बरी गर । विपक्षी भन्छन् अजिवन करावास गर ।
पक्ष विपक्षले आआफनो धारणा बनाईरहदा कानुनले के भन्छ त्यो बुझन् जरुरी छ किनेभने उनालाई दण्डसजाय कानुन अनुसार हुने हो न की कसैको धारणा अनुसार ।
के भन्छ कानुनले ?
रवि लामिछाने, उनका सहकर्मी युवराज कँडेल र ओखलढुङ्गाकी अस्मिता कार्कीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन अन्तर्गतको मुद्दा परेको छ । उनीहरुलाई हत्याको अभियोग लागेको होईन तर उनका विपक्षीहरु लामेछानेले नै हत्या गरेको झैं गरी आजिवन कारवासी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुलाई लागेको आरोप पुष्टी भयो भने पनी उनीहरु हत्यारा नभएर आत्माहत्याको कारक मात्र ठहरिनेछन् ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा कसुुैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराएको पुष्टि भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यदी आदालतवाट रवि, युवराज र अस्मिता देषी ठहर भएको खण्डमा उनीहरुलाई यस मुद्दा अन्र्तगत अधिक्तम पाँच वर्षसम्म मात्र कैद हुनेछ ।